U-NITOYO wayekade eyiqembu elincane elakhiwe abantu abangu-5 ngo-2000, elise-Chengdu, eSichuan.Ngemva kwemizamo yethu, manje isithuthuke yaba inkundla yesevisi yemoto enendawo eyodwa abantu abangaphezu kuka-60, ibambisane namazwe/izifunda ezingu-180 futhi yasiza amakhasimende angaphezu kuka-400.
Kusukela ngo-2000 ~
Ngo-2000, ithimba lethu elasungula ibhizinisi laqala ibhizinisi lokuthekelisa izingxenye zezimoto ngokuvakashelwa okuningi kwamafayela kanye nophenyo cishe kuwo wonke amafekthri aseChina, futhi lathola izimboni ezifanele.
2000-2005 Ukwanda Kuyo yonke Imakethe yaseNingizimu Melika
Ngemva kwemizamo eminingi nezinguquko sikwazile ukuthola ukwethenjwa kwamakhasimende emakethe yaseNingizimu Melika ikakhulukazi eParaguay.
2000-2010 Ukuzalwa Kwemikhiqizo Yethu NITOYO&UBZ
Ngemizamo yeminyaka eyi-10 saziwa njenge-NITOYO&UBZ emhlabeni wonke, amakhasimende amaningi athemba ikhwalithi nensizakalo ye-NITOYO.Ngaphezu kwalokho, njengoba ilogo yethu ibonisa, sizibophezele ekunikezeni imikhiqizo emihle ukuvikela ukushayela kwakho.Ngokusekelwe kulokhu, sinezinhlaka emazweni amaningi ngokwesibonelo eParaguay, eMadagascar.
2011 Intuthuko Ehlukahlukene
Ngokuthuthuka kwe-inthanethi, siqala ukunweba inkundla ye-inthanethi kufaka phakathi isitolo sesiteshi samazwe ngamazwe se-Alibaba kanye newebhusayithi yethu esemthethweni ethi https://nitoyoauto.com/, facebook, linked-in, youtube.
2012-2019 Ukukhula Kwamazwe Ngamazwe
Ngenxa yendlela esasigandaywe ngayo ngaphambili, kancane kancane sandisa izimakethe eziningi futhi ezidumile e-Afrika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi, naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia Market.
Ngo-2013 samukelwa ngempumelelo yimakethe yase-Afrika futhi sazuza ama-oda enani elingu-1,000,000 USD.
Ngo-2015 sikujabulele ukuba yileyo ethenjwa abangane abaningi baseNingizimu-mpumalanga Asia.
Ngo-2017 saya eLatin Expo nase-America Aapex phakathi kukaJulayi noNovemba.Kulo nyaka sizuza idumela lethu kulezi zimakethe ezimbili njengoba ama-oda ethu–1,500,000 USD afakazela.
Ngo-2018-2019 sahambela imibukiso eyengeziwe, ethunyelwa emazweni angaphezu kuka-150.
2021 UNITOYO Uhlanganisa iminyaka engama-21
Amathemba okukhula kweqembu mahle kakhulu.Kusukela ngo-2000, siye sagcina inhloso yethu yasekuqaleni: ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angathenga ngokuzethemba futhi abathengi bangasebenzisa ngokuzethemba!